MODA | Article Detail | A MIGHT SARR COVER SONG CONTEST ရဲ့ FINAL ROUND LIVE PERFORMANCE
A MIGHT SARR COVER SONG CONTEST ရဲ့ FINAL ROUND LIVE PERFORMANCE
မျိုးဆက်သစ် ရွက်ပုန်းသီး အဆိုရှင်လေးတွေ ပေါ်ထွက်မယ့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခု
A MIGHT SARR CHANNEL နှင့် JBJ Entertainment မှဦးစီးပြီး Title Sponsor - Grand Royal Smooth နှင် ့Award Sponsor – iflix တို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ A MIGHT SARR COVER SONG CONTEST ဟာ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ကနေ စတင်ပြီး First Round နှင့် Second Round ကို Online Audition ဖြင့်ခေါ်ဆိုကာ Voting စနစ်ဖြင့် အမှတ်ပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့ ဆန်ခါတင် Top 10 ကတော့ Final Round တွင် Live Performance ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
A MIGHT SARR COVER SONG CONTEST ရဲ့ Final Round တွင် အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးမင်းများအဖြစ် နိင်ငံကျော် Pop ဂီတပညာရှင်များဖြစ်သော အဆိုတော် ချောစုခင် နှင့် ဖိုးကာ အပါအဝင် လူငယ်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အသဲစွဲ Rock Star တစ်ယောက်ဖြစ်သော Raymond(Idiots)တို့မှ Top 10 ဆန်ခါတင် ဆယ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းများကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ပါ၀င်ကူညီပံ့ပိုးပေးမည် ဖြစ်ပါတယ်။
Final Round Live Performance ကို November 17 ရက်နေ့၊ ညနေ၅နာရီ မှ ၇နာရီအထိ Junction Square Shopping Center တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေလအတွင်း ထွက်ရှိလာတော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့ Lady Gaga ရဲ့ Album သစ် "Chromatica"
Little Monster လေးတွေအတွက်တော့ ရင်ခုန်စရာသတင်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ
Mother Monster ကြီး လေဒီဂါဂါကတော့ သူချစ်ရတဲ့ Little Monster လေးတွေကို ထပ်ပြီး ရင်တစ်ဒိတ်ဒိတ်ခုန်အောင်လုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ အဲဒါကတော့ သူမရဲ့ Album အသစ်ဖြစ်တဲ့ "Chromatica" ကို လာမယ့် မေလ (29) ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချီသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းကပဲ သူမရဲ့ Album မှာ
ပါဝင်တဲ့ Arianna Grande နဲ့အတူတွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ Rain on me သီချင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့ ၊မေလ (၂၂) ရက်နေ့က Music Video အနေနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်၀န်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးမှူကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Rain on me အရှေ့ မကြာသေးခင်ကလည်း Chromatica Album ရဲ့ official cover ပုံနဲ့အတူ Album ရဲ့ track list ထဲကသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Stupid love သီချင်း Music Video တို့ကိုလည်း ထွက်ရှိထားပါသေးတယ်။
အခုတစ်ခေါက် Album မှာတော့ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ အခြား ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်တွေလည်း ပါ၀င်အားဖြည့်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီ Album မှာ စုစုပေါင်းသီချင်း (၁၆) ပုဒ်ပါ၀င်ပြီး ထူးခြားချက်အနေနဲ့ Arianna Grande နဲ့အတူ "Rain on me" , Black Pink နဲ့အတူ "Sour Candy" , Elton John နဲ့အတူ "Sine from Above" ဆိုတဲ့သီချင်းတွေကို အတူတကွ အတွဲညီညီ တွဲဖက်သီဆိုထားတာ တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အမြဲတမ်း သူများနဲ့မတူပဲ အမိုက်စားတွေကိုမှ အံ့အားသင့်လောက်အောင် ချပြတတ်တဲ့ Mother Monster ကြီးရဲ့ ထပ်ထွက်လာမယ့် Album အသစ်အတွက် သူမရဲ့ ချစ်ပရိသတ် Little Monsterလေးတွေကတော့ ဘယ်လိုအသစ်အဆန်းတွေမြင်ရပြီး ဘယ်လိုထူးခြား Hit ဖြစ်တဲ့သီချင်းတွေကိုနားဆင်ရမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာပါပဲ။
SM Entertainment က K Pop Group တွေရဲ့ လူကြည့်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Music Video များ
အကြိုက်ဆုံး Music Video က ဘာဖြစ်မလဲ?
နာမည်ကြီးတဲ့ K- pop Idol တွေရဲ့ Music Video တွေက သန်းနဲ့ ချီပြီး Viewer တွေရနေတာ အားလုံးအသိနော်။ နောက်ပြီး Steaming လုပ်တာ၊ Share တာစတဲ့ Fan တွေရဲ့ အားပေးမှုကြောင့်လည်း Viewer တွေ သိသိသာသာတိုးလာတဲ့ Music Video တွေလည်း အများကြီးနော်။ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Video တွေအထဲက လူကြိုက်များတာနဲ့ လူကြိုက်နည်းတာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ K Pop ပရိတ်သတ်တွေဆိုလည်း SM ကထွက်တဲ့ ဘယ် Music Video က ကိုယ့်အတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်မလဲ။ ထွက်ထားသမျှထဲက ပရိတ်သတ်တွေ သဘောအကျဆုံး Music Video တွေကို ဖော်ပြပေးမှာမို့ ကိုယ့်အကြိုက်ကော ပါနေမလားကြည့်လိုက်နော်။
10. "Lil' Touch" Oh!GG 소녀시대 By Girl's Generation
9. "Jopping" 슈퍼엠 By SuperM
8. "Call Me Baby" 엑소 By EXO
7. "Bad Boy" 레드벨벳 By Red Velvet
6. "Psycho" 레드벨벳 By Red Velvet
5. "Obsession" 엑소 By EXO
4. 'Tempo" 엑소 By EXO
3. "Ko Ko Bop" 엑소 By EXO
2. "Monster" 엑소 By EXO
1. "Love Shot" 엑소 by EXO
Club တွေ Festival တွေလွမ်းနေသူတွေအတွက် အိမ်မှာပဲ EDM Live Set များနဲ့စီးမျောကြည့်ရအောင်
Earphone လေးတပ်၊ Volume ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီးသာ ကဲလိုက်တော့
အခုချိန်က မြန်မာနိုင်ငံတစ်ချို့နေရာတွေကို Lockdown တွေဖြေလျော့ပေးနေပေမယ့် အပြင်ထွက်ဖို့တော့ Safe မဖြစ်သေးတဲ့အနေအထားမို့ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်မှာပဲနေကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။
တစ်ချို့ Public နေရာတွေ၊ ရုံးတွေ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေမယ့် လူအများစုဝေးရာ ဖျော်ဖြေရေး (Entertainment) Sector တွေက အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ ဆက်ပိတ်ထားဦးမှာပါ။ Raver တွေ၊ Party Animal တွေ၊ ပွဲကြိုက်ခင်လေး တို့အတွက် Club တွေ Festival တွေကတော့ လက်ရှိမှာ မဖွင့်သေးတာမို့ အားလုံးလွမ်းနေကြပြီထင်ပါတယ်။ သီချင်းတွေ EDM တွေနဲ့ ပွဲတွေမှာပြန်ကဲရဖို့တော့ လိုသေးတာမို့ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ပဲ အမိုက်စား EDM Live Set တွေကို ပြန်လည်ခံစားပြီး ကဲလိုက်တော့နော်။
တစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာ နားဆင်ရတာပျင်းတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ Group Call၊ Facetime ခေါ်ပြီး အတူတူ ကဲလို့ရတယ်နော်။ Live Set တွေကိုလည်း စိတ်ကြိုက်နားဆင်လို့ရအောင် EDM Music Genres တွေနဲ့ Artist တွေ အစုံအလင် Live Set တွေကို Collection လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
4B b2b FLOSSTRADAMUS @ HARD SUMMER 2019 [FULL SET] [AUDIO ONLY] ❖ Jersey Club
EDC Las Vegas 2018 - Joyryde Full Live Set Kinetic Field
Tchami x Malaa | Tomorrowland Belgium 2019 - W2
Angerfist 'LIVE' vs. Warface 'Heavy Artillery' - HARDFEST 2019
Boombox Cartel - EDC Las Vegas 2019 Full Set
REZZ - EDC Las Vegas 2019 (Full Live Set)
NGHTMRE & SLANDER [Gud Vibrations] - Live @ Ultra Music Festival Miami 2018 (audio)
#EDM Live Sets
“Barong Family” Label အောက်ကနေ သီချင်းသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ အသက်၁၈နှစ် DJ လေး Jerrÿ Jay
Local Power ရဲ့ Music Talent တွေကတော့ တကယ်ကြမ်းလာပါပြီ
လူငယ် Music Artist လေးတွေစုစည်းထားတဲ့ မြို့ဂေါ်လီအဖွဲ့ထဲက အသက်အငယ်ဆုံး ကောင်လေး Jerrÿ Jay ကိုတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ နာမည်ကျော် EDM Show တွေအပြင် 808 Festival 2019 မှာလည်း Local Line-Up အဖြစ်ပါဝင်ထားသူမို့ သူ့ရဲ့ Music ဖန်တီးမှုနဲ့ Talent တွေကတော့ အရင်ကထက်ပိုကြမ်းလာတာ အမှန်ပဲ။
လတ်တလောမှာ Jerrÿ Jay က သြစတြေးလျမှာ ပညာသင်ကြားနေပေမယ့် သူချစ်တဲ့ Music နဲ့တော့ အဆက်မပြတ်သွားခဲ့ပါဘူး။ ပိုပြီး အံအားသင့်သွားတာက အသက် ၁၈နှစ် Music Artist လေးက နာမည်ကျော် Amsterdam based Record Label ဖြစ်တဲ့ “Barong Family” Label အောက်ကနေ သီချင်းထွက်ရှိလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“Barong Family” Label အောက်မှာ ဆိုရင်မြန်မာပရိသတ်နဲ့လည်း ရင်းနှီးပြီးသား Music Artist တွေဖြစ်တဲ့ Yellow Claw ၊ Moksi ၊ Wiwek နဲ့ RayRay တို့အပြင်တခြား Music Producer တွေလည်းအများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ “ ကျွန်တော့် Career တစ်လျှောက်လုံးမှာ အခုလို မှတ်ကျောက်တစ်ခုကို ကြိုးစားတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ခြေလှမ်းတိုင်းအတွက် အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ယုံကြည်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းပရိသတ် တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ရင်ထဲကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့”Jerrÿ Jay Official Facebook Page ကနေပြောထားပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း Track အသစ်အတွက်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။
အခုတော့ Barong Family ရဲ့ Family Matters Vol.7 (Track 5) အဖြစ်ပါဝင်ထားတဲ့ Notorious CHRIS & Jerrÿ Jay ရဲ့ “I Would Never” ကို ကိုယ်တိုင်ပဲ စီးမျောခံစားကြည့်လိုက်ပါတော့။
Check out at https://fanlink.to/familymattersvol7?fbclid=IwAR0DxTCjXVJ2C7bxCCxCbPbwzdonMe5WCGGvfwxV4VYv9W0A6H2oAZEA_PE
Cheating လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ သီချင်းတွေက ဘယ်သီချင်းတွေလဲ
အခုခေတ်မှာ အရင်လို ချစ်သူတစ်ယောက်ကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတာတော်တော်တော့ ရှားသွားပြီလို့ပြောရမှာပါ။ အဲ့လိုပြောလို့လည်း အချစ်ကိုစိတ်မကုန်သွားပါနဲ့ဦး။ ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေး၊ ကောင်မလေးကို ပဲ သစ္စာရှိရှိချစ်နေတဲ့သူတွေလည်း ဒီကမ္ဘာ ပေါ်မှာအများကြီးရှိလို့ပါ။
ဒါပေမယ့်တစ်ချို့ကျတော့လည်း သူများချစ်သူကိုမှ လုယူချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိသလို ရည်းစားရှိလျက်နဲ့လည်း တစ်ခြားသူနဲ့ Flirt ချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် International မှာ Hit ဖြစ်နေတဲ့ Cheating Song လေးတွေကို စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်လည်း သင့်ချစ်သူကိုလာထိပြီဆို နည်းနည်းလေးမှ မခံနဲ့နော်။
Break Up With Your Girlfriend - Ariana Grande
Whatchamacallit - Ella Mai, Chris Brown
I Know What You Did Last Summer - Shawn Mendes ,Camila Cabello
Non Of Your Concern - Jhené Aiko ft. Big Sean
Dilemma - Nelly ,Kelly Rowland
သင်ကြားဖူးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ Tik Tok Video တွေရဲ့ Original Song များ
တပိုင်းတစပဲသိတဲ့ သီချင်းတွေကို အပြည့်အဝနားထောင်လိုက်တော့နော်
Short Video တစ်ခုကို စက္ကန့်ပိုင်းပဲကြာတဲ့ Video App တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tik Tok ကိုတော့ Gen-Z တို့အတွက်တော့ အရမ်းရင်းနှီးပြီးနေ့တိုင်းထိတွေ့နေကျ App ဖြစ်မှာတော့သေချာပါတယ်။ အခုလို Locksdown တွေ၊ Self-Quarantine တွေလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ Tik Tok ကလည်း Facebook၊ Instagram၊ YouTube နဲ့ Neflix တို့နည်းတူ လူတော်တော်များများ အသုံးပြုလာကြတဲ့ App တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ စက္ကန့်ပိုင်းပဲကြာတဲ့ Short Video လေးတွေကို Scroll လုပ်ရတာလည်း တကယ် Entertaining ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေကစလို့ အသက် ၂၈ နှစ်လူငယ်တွေအတွက် သူတို့ရဲ့ အိမ်ခန်းထဲမှာ ပေါ့ပါးတဲ့ အပြုအမူတွေ၊ Dance Move တွေနဲ့ Lip Sync Video တွေကို Tik Tok မှာတင်ပြီးတော့လည်း Social Media တစ်ခုလိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
Short Video လေးတွေတော်တော်များများက သီချင်းနောက်ခံနဲ့ပြုလုပ်ရတာမို့ သီချင်းခပ်မိုက်မိုက်တွေကိုလည်း Play Back အနေနဲ့ ရွေးချယ်ကြတယ်။ အဲ့ထဲက တစ်ချို့သီချင်းတွေဆိုရင် Billboard မှာ Hit ဖြစ်ပြီးသားသီချင်းတွေဖြစ်သလို တစ်ချို့သီချင်းတွေကျတော့ Tik Tok မှာ တပိုင်းတစပဲကြားပြီးမှ နာမည်ကြီးသွားတဲ့သီချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ သင်လည်း တကယ်လို့ Tik Tok သိပ်မသုံးတဲ့သူဖြစ်ရင်တောင် “သြော်..ဒီသီချင်း ကြားဖူးပါတယ်။ ဘာသီချင်းပါလိမ့်။” ဆိုပြီးစဉ်းစားနေရင် ဒီ အောက်က Playlist ထဲကတစ်ပုဒ် ပုဒ်တော့ဖြစ်မှာပါ။
Tik Tok မှာ 15 စက္ကန့်လောက်ပဲ နားဆင်လိုက်ရတဲ့ သီချင်းတွေကို အခု အစအဆုံးပြန်နားဆင်ကြည့်လိုက်တော့နော်။
1.Roses - SAINt JHN (Imanbek Remix)
2.My Heart Went Oops - TIAGZ
3.Says So - Doja Cat
4.Pretty Girl - Maggie Linderman (Paul Gahnnon Remix)
5.Toosie Slide - Drake
6.Boss B*tch - Doja Cat
7.Old Town Road - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
8.Don't Start Now - Dua Lipa
9.Bored In The House - Tyga x Curtis Roach
10.ROXANNE - Arizona Zewas
11.Yummy - Justin Bieber
12.Superlonely - BENEE ft. Gus Dapperson
13.Non-Stop - Drake
14.Like That - Doja Cat ft. Gucci Mane
15.Why Is Everything Chrome? - King Critical
16.Potret - Bagaikan Langit
17.Dance Money - Tones and I
18.Savage - Megan Thee Stallion
19.Life Is Good - Future ft. Drake
20.Exactly How I Feel - Lizzo ft. Gucci Mane
အခုလို Lockdown အချိန်မှာ သီချင်းတွေနဲ့ အတူတူ အချင်းချင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြမယ်
သီချင်းတွေမှာ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တွေကဘယ်လို အားဖြည့်ထားကြတာလဲ
အခုလို COVID-19 Positive Case တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ အားလုံးလည်း စိုးရိမ်နေကြမယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံး Coronavirus ကာကွယ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာ တွေကို စနစ်တကျလိုက်နာ၊ အိမ်မှာနေပြီး ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် နေထိုင်ကြဖို့နဲ့ မိမိရဲ့ စိတ်ကိုလည်း အခုချိန်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအရမ်းမများအောင် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ပြီးသွားတော့ အခုချိန်က Negative တွေပြောပြီး Anxiety တွေဖြစ်နေမယ့်အစား အားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ တညီတညွတ်တည်း ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကူညီကြရမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထပ်မံပြီး သတိပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အားလုံးနဲ့ထပ်တူ ပြည်သူချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်၊ တေးသံရှင်တွေအများအပြားကလည်း ဒီ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် ငွေအားရောလူအားပါ တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားလာကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တွေကလည်း အခုလို အခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကျအချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်း မေတ္တာတရားတွေနဲ့ သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေနဲ့ မြန်မာပြည်သူများအားလုံးအတွက် အားပေးနှစ်သိမ့်မှုတွေအဆက်မပြတ်ပေးနေပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးတွေကိုနားဆင်ရင်း ရှေ့ဆက်ကြရမယ့် အနာဂတ်အတွက် စိတ်ခွန်အားနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတစ်စုံတစ်ရာပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ ကဲ ဒီသီချင်းလေးတွေနဲ့ အချင်းချင်း စိတ်ခွန်အားတွေ အားပေးမြှင့်တင်ရအောင်။
သင့် Account ထဲမှာရှိတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်း စိတ်တက်ကြွသွားအောင် သီချင်းလေးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါဦးနော်။
ကမ္ဘာမြေသီချင်း - Myoe Kywat Myaing၊ Alex၊ HanTun၊ R Zarni၊ Phyoe Gyi၊ Ko Aung၊ Tha O၊ Bunny Phyoe၊ Nay Win၊ Phyoe Lay၊ G Fatt၊ Phyoe Pyae Sone၊ Aung Htet၊ Mg Mg Pyae Sone၊ Pan Yaung Chel၊ Mary၊ Jewel၊ Gabriel Phway၊ Amera Hpone and Sai Sai Kham Leng
Yangon Was Before – Big Bag၊ Raymond၊ Yan Yan Chan၊ Jessica Perry၊ May Toe Khine၊ Han Nay Tar၊ Sweet Wuttyi Thaung၊ Ni Ni Khin Zaw၊ Daung၊ Wai La၊ Ar-T၊ Candy May
တစ်နေ့ - Ni Ni Khin Zaw
အိမ်မှာနေချင်တာပေါ့ - ကော်နီ
မြန်မာနိုင်ငံက Indie Band လို့ပြောရင် ချန်ထားလို့မရတဲ့ အမိုက်စား Band များ (Part 1)
Music ဆိုတာက လူတိုင်းနဲ့ မကင်းတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲက လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ။ သီချင်းတွေနားထောင်နေတဲ့နေရာမှာလည်း Music Genre အမျိုးအစားက မြောက်များစွာရှိသလို နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ထပ်ပြီး Evolve ဖြစ်တာတဲ့ Music Genre တွေကလည်း အတော်လေးကို စုံလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဆိုတော့ Indie Music အကြောင်း နည်းနည်းဆက်ပြောချင်ပါတယ်။ Indie Music ကိုတော့ သိတဲ့သူတွေကသိပါတယ်။ Independent Music ဆိုတဲ့အတိုင်း လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတယ်။ စည်းတွေဘောင်တွေမရှိဘူး။ မိတ်ဆွေ မျောချင်မျောလို့ရသလို ကခုန်ချင်တဲ့အချိန်လည်း ကခုန်နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက Indie Band တွေအကြောင်း မသွားပဲ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အမိုက်စား Band တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Indie ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အများအပြားရထားပြီး တကယ့်ကို Talented ဖြစ်တဲ့ Band တွေမို့ တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ အပိုင်း ၂ ကိုတော့ ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာမို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးပါဦး။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Indie Pioneer တွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Powerful ဖြစ်တဲ့ Indie Rock Energy အပြည့်နဲ့ ရှိုးပွဲတွေမှာ သောင်းကျန်းလို့ကောင်းတဲ့ Band တစ်Band ပါ။ အမေရိကန် အော်စတင်မြို့မှာရှိတဲ့ အကြီးဆုံး ဂီတပွဲတော် ဖြစ်တဲ့ SXSW 2014 မှာ ပထမဆုံး ဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့ မြန်မာ Indie Band ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ ဂျာမနီ၊ ဒိန်းမတ်၊ အင်ဒို၊ ထိုင်းစတဲ့ ပြည်ပဖျော်ဖြေမှု အတွေ့အကြုံများစွာရှိတဲ့ Band လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Album နှစ်ချပ်နဲ့ Single တစ်ခုထွက်ထားပါတယ်။ Flying Away၊ ရုပ်ရှင်၊ မိုးညအိပ်မက်များ၊ Rocknroll တို့ကတော့ ကျွန်မရဲ့ အကြိုက်တွေပါ။
နောက်ထပ် အမိုက်စား Indie Rock Band ကတော့ Sunrise 18 ပါ။ Sunrise ရဲ့ သီချင်းတွေက မြို့ပြရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်လွင်နေတတ်ပါတယ်။ သီချင်းစာသားတွေက ပျော်စရာကောင်းပြီး လိုက်ပြီး ကခုန်လို့ကောင်းစေတာအမှန်ပါ။ ရန်ကုန်လို့ ခေါ်တဲ့ Album ကို ၂၀၁၉ မေလတုန်းက ထွက်ရှိထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ J Donut ရှိသလိုပဲ (Facebook က ရန်ကုန်၊ မန္တလေးကိစ္စကိုပြောတာပါ) Album ထဲက ရန်ုကုန်ဆိုတဲ့သီချင်းကိုလည်း နားထောင်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်။ ဥပါဒါန်သီချင်းနဲ့ နှစ်တစ်ရာကလည်း Must Try ပါ။
Indie Pop ချိုချိုလေးနားထောင်ချင်ရင်တော့ The Peacists က မိတ်ဆွေတို့ကို အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ 80 Vibe ရတဲ့ Peacists ရဲ့ သီချင်းတွေက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတာမို့ မျောချင်တဲ့သူတွေအတွက် ကွက်တိ။ Album အနေနဲ့ General Tiger Gun နဲ့ အတူ ထုတ်ထားတဲ့ 9' Night Indie နဲ့ လူငယ်တွေကြားမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Clothing Line တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Madnest နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကြယ်ကမ္ဘာခရီးစဉ်ဆိုပြီး ထွက်ရှိထားပါတယ်။ ကိုယ့်အကြိုက်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အပြုံးတေး၊ အကြင်နာစိုက်ခင်းများနဲ့ ကမ်းခြေတွေကိုတော့ ရေလည်ခိုက်ပါတယ်။ Album အသစ်တော့ နားမထောင်ရသေးလို့ နားထောင်ပြီးသွားတဲ့သူတွေ ရှိရင်လည်း Review လေး ပေးခဲ့ကြပါအုံး။
General Tiger Gun
မြန်မာလိုဆို ဗိုလ်ကျားသေနတ်လို့ ထူးထူးခြားခြားနာမည်ရတဲ့ Indie Rock Band ပါ။ Alter/ Rock Sense အပြည့်နဲ့ General Tiger Gun ရဲ့ သီချင်းတွေက ခုန်ပေါက်သောင်းကျန်းလို့ ကောင်းစေမှာပါ။ ကျွန်မအတွက်တော့ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်း Movie Soundtrack တွေကို နားထောင်နေရသလို ခံစားမှုရသကိုပေးပါတယ်။ The Peacists နဲ့ 9' Night Indie Album၊ ထိန်းချုပ်မရ EP Album ဆိုပြီးထွက်ရှိထားပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်၊ ဝေးလေကောင်းလေနဲ့ မင်းဘေးနားတွေက Favorite တွေပါပဲ။
#Myanmar Indie Band
ကမ္ဘာကျော်တွေရဲ့ တင်ဆက်မှူကို Live အနေနဲ့ကြည့်ရှူခံစားနိုင်မယ့် One World : Together at Home ဖျော်ဖြေပွဲကြီး
Quarantine ကာလ အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့အချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ လူတွေရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှူတွေ ငြီးငွေ့မှူတွေ ဟာလည်း တစ်စထက်တစ်စတိုးပွားလာနေပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ လူသားတွေရဲ့အားကိုးရာအနေနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍတွေဟာလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အရေးပါလာတာမို့ ဒီလိုဖျော်ဖြေရေးတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာလည်း မဖြစ်မနေ အရေးကြီးလာခဲ့ပါတယ်။အခုလည်း One World:Together at home ဆိုတဲ့ Global Special Live ဖျော်ဖြေပွဲကြီးကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့မှာရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် တိုက်ရိုက်တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်‌ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကောင်းတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖျော်ဖြေပွဲကြီးကိုတော့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (WHO) နဲ့ Global Citizen တို့က ပူးပေါင်း‌တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပြီး Covid-19 ကပ်ဆိုးရဲ့ဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပြည်သူတွေအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေဖို့အပြင် အသက်ကိုပဓာနမထားပဲ ရှေ့တန်းကနေ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံနေကြတဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးက ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းတွေကို ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်လိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေနဲ့ Virtual Concert အဖြစ် ဖန်တီးတင်ဆက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖျော်ဖြေပွဲကြီးမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Lady Gaga , Celine Dion ,Taylor Swift , Sam Smith , Jessie J , Elton John , Ellie Goulding, Green day ,John Legend , Alicia Key , Jenifer Lopez နဲ့ Billie Eilish တို့အပြင် အခြားသော အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာ ပါ၀င်သွားမှာ‌မို့ အရမ်းကိုထူးခြားတဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်များစွာကို ကိုယ့်အိမ်ကနေထိုင်ပြီး အားပေးရမှာဖြစ်တာကြောင့်လည်း လုံး၀ကိုလက်လွတ်မခံသင့်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။
One World: Together at Home ဆိုတဲ့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကို April 18ရက်နေ့မှာ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဒေသစံတော်ချိန် EST : 2:00 pm မှာ ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှူခံစားလိုတယ်ဆိုရင်တော့ April (19) ရက်နေ့ 12:30 am အချိန်မှာ Joox ရဲ့ Application ကနေရော Joox Myanmar ရဲ့website ကနေပါ Online (Live) အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှူအားပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် Canal + (GITA) ရုပ်သံလိုင်းကနေလည်း Delay telecast အဖြစ် April (19) ရက်နေ့ ည 8 နာရီအချိန်မှာ ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားဦးမယ်လို့သိရပါတယ်။ Quarantine ကာလ အိမ်မှာနေရင်း ကိုယ်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ Special Live Event ကို ကြည့်ရှူခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လုံး၀လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တာမို့ လာမယ့် April (19) ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အားလုံးအတူတကွစောင့်ကြည့်ခံစားရင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကိုအမြန်ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရရှိကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
Photo Credit To Joox Myanmar Facebook Page , Canal + Myanmar FG Facebook Page and Web Sources.
#Global Special Live
#OneWorld: Together at Home